Lalao an-tsolosaina mampitaintaina :: Maneho tantarana tovovavikely miady amin’ny jiolahy any atsimo ny “Dahalo” • AoRaha
Lalao an-tsolosaina mampitaintaina Maneho tantarana tovovavikely miady amin’ny jiolahy any atsimo ny “Dahalo”
Voka-pikarohana malagasy noketrehin’ny trano mpamokatra Lomay, ny lalao an-tsolosaina (jeux video) “Dahalo”. Kilalao mampitaintaina manoloana ny ho avin’ilay tovovavikely miaina sy monina any amin’ny faritra misy dahalo izy io.
Mahavariana sady mahatalanjona ny lafiny teknôlôjia ao anatiny sy fisehoany ivelany. Mitondra ny fifantohan’ny mpilalao hitsidika ny faritra Atsimon’i Madagasikara mba hifanandrina amin’ireo jiolahy mpangalatra omby sady mampihorohoro ny mponina any an-toerana ny lalao “Dahalo”.
Rohy, tovovavy mpianatra mpitsabo, no tantara fototra hoentina ao. Miaina anaty fivadibadihana toe-javatra maro izy kanefa tsy maintsy miaina eo anivona fiarahamonina feno fifankahalana sy miaro ny olona tsy manan-tsiny manoloana ny tsy fandriampahalemana manjaka ao.
Manomboka amin’ny fikatsahana haja am-pahamendrehana ny mpilalao no tsy maintsy mahafehy ny fampiasana fitaovam-piadiana maro, toy ny basy…Takina ihany koa ny fahaizana mampihatra paikady isan-karazany rehefa mifanandrina amin’ny dahalo.
Ankoatra an’i Rohy, misy olona roa hafa azo lalaovina. Maharitra adiny valo mahery no misedra na mianjoria ao anatina tantara feno risi-po sy dona. Miady amin’ireo jiolahy lozabe ao Atsimo sy manafaka ireo olona tratran’ny fampahoriana any an-toerana no iraka fototra. Mila miditra ao anatin’ireo mpilalao fototra izay te hamerina ny filaminana sy fandriampahalemana any amin’iny faritra iny. Maro ny tsy ampoizina ho hita, raha vantany vao mikirakira ity lalao ity.
Raha ny fantatra, amin’ny tapak’ity volana novambra ity vao azo jifaina ao amin’ny “Steam” ny lalao “Dahalo” amin’ny sarany 80 000 ariary.
Tetikasa 3i :: Hamerina ny hasin’ny fifankatiavana sy ny fihavanana